pack pack stabilizer for profiles Vagadziri - China imwe pack inodzikamisa maprofayli Vatengesi & Fekitori
PVC Calcium Zinc Stabilizer ye extrusion plastiki PVC mbiri windows musuwo wedenga
PVC Stabilizer / kupisa kudzikamisa ndiyo imwe yemhinduro dzakanakisa dzemazuva ano uye dzinoshanda PVC windows, madhoo, gonhi redhorobha, musuwo wekutsvedza, mahwindo ezvitoro, masuo ekupinda uye masvingo ekuparadzanisa akavakirwa pamaprofiyamu system. Rudzi rwekutanga uye kuramba kwemamiriro ekunze kwewhite windows profiles ndizvo zvakakosha zvinodiwa kumaprofiles, kusvika kumagumo aya, isu takagadzira imwechete-pack pack stabilizers ine yakanakisa static uye ine simba zvinhu, uye ine zvido zve UV kuramba. Zvichienzaniswa neyechinyakare Pb masisitimu, CaZn zvinodzora zvine zvakafanana kana zvirinani kuchengetwa kwemavara, simba rinokanganisa kana kudzikama kweyakaenzana, kunyangwe kana ichionekwa kune yakasimba tembiricha shanduko, kana mune yakanyorova uye yakaoma mamiriro ekunze uye nemagetsi ezuva kutenderera iwo PVC mawindo profiles akasimbiswa neiyi nzira inogona kuchengetedza yavo michina zvivakwa.
PVC Stabilizer yeMvura Isina Tile Roofing Tile.Purasitiki nemakadhibhokisi PVC Corrugated Sheet PVC resin Plastiki Sheet
Calcium Zinc Stabilizers / kupisa stabilizers inopa isiri-chepfu PVC padenga masisitimu akaona kukura kukuru mumakore achangopfuura nekuda kweakasiyana maitiro, kunyanya, hupenyu hurefu, kugadzikana mune yakaoma mamiriro ekunze uye tembiricha yakanyanyisa, yakaderera hupenyu kutenderera mitengo, simba simba, kupisa uye kutaridzika kwezuva, kuramba murazvo, makemikari uye girisi kuramba pakati pezvimwe zvakanaka. Zvakare, zvinodzora zvePVV zvinopa kushanda nesimba, inokodzera kugadzirwa kwemashizha, kugadzikana kwakanaka kwemafuta, kugadzikana kwemafuta kwenguva refu.
Yakakwira mhando PVC Stabilizers yeiyo terevhizheni PVC zvivharo zveBindu fenzi Picket fenzi bhiza njanji fenzi
Penzi yePVC inokwezva uye inoshanda sarudzo kune chero padhadhi, yakagadzikana kana epurazi rehosi. Vinyl njanji fenzi, inowanzozonzi seyakaganhurirwa njanji fenzi, iri rakakura rehupfumi fenzi mhinduro yemarudzi ese eprojekti. Inofananidzwa neyechinyakare Pb masisitimu. Aimsea inopa yakakura yakakura renji yekusimbisa yemhando dzese dzenhare. Aimsea CaZn zvigadziri zvine nani kuchengetwa kwemavara, simba rekukanganisa kana kujeka kugadzikana kwekugadzira PVC fenzi. Kunyangwe painoiswa kune yakasimba tembiricha shanduko, kana mune yakanyorova kana yakaoma mamiriro ekunze uye nemwaranzi yezuva macircuit iyo PVC fensi yakasimbiswa neiyi nzira inogona kuchengetedza yavo mechiniki zvivakwa.
Yakanakisa PVC inodzikamisa yekupisa kuputira Makara hwindo furemu remberi musuwo makona co-extrusion ruvara
Flexible vinyl yakasimba kwazvo inodziya inodziya painoshandiswa sechikamu kana madhoo. Zvinogona kukonzeresa kupisa kwakawanda kwemafuta muzvivakwa zvako, imba yekuchengetera kana mashopu. Nyore kushandisa uye kuisa, vinyl zvikamu zvinomisa kuchinjana kwekupisa, nokudaro kuchengetedza mutengo uye kuwedzera nyaradzo yevashandi. Yedu Calcium Zinc inogadzikana ichagamuchira zvese izvi zvinopisa zvekudzivirira zvinodiwa izvo zvisina-chepfu uye nharaunda inoshamwaridzika. Iyo stabilizer ine yakanaka mamiriro ekunze, kugadzikana kwekutanga kupenda, yakadzika ndiro kunze, yakafara kugadzira renji.
Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC Stabilizer, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC yokuvirisa,